အန်တိုနော့ဗ် An-12BK ပြို v2 FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အန်တိုနော့ဗ် An-12BK ပြို v2 FS2004
အရွယ် 51.2 ကို MB
downloads ရယူရန္ 13 892
Author: ဗလာဒီမာ Zhyhulskiy, Dmitriy Smirnov
GMax မော်ဒယ်ဗားရှင်း 2009, ပြီးပြည့်စုံကာတွန်း, အသေးစိတျကို virtual cockpit, 3D နှင့်အတူ aircrew လုပ်ပါတယ်နှင့်တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးကကာတွန်းကား။ 15 repaints ပေါင်း Aeroflot Cargo ပါဝင်သည်။
သငျသညျရုရှားလေယာဉ်တစ်စင်းကိုကြိုက်လျှင်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, ဒီဟာ "ရှိရမည်", တကပြီးပြည့်စုံအထုပ်နဲ့ပျံသန်းဖို့တကယ့်ပျော်မွေ့င်နေပါသည်! သင်စစ်ဆင်ရေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုလုပျနိုငျ, မော်တော်ကားသို့မဟုတ်ဆိုက်ဘေးရီးယားအထက်ကုန်ပစ္စည်းများပေါက်ပေါ်သယ်ဆောင်ရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖို့, ကို manual ဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ။ သင်တို့သည်အလွန်ကောင်းစွာအင်္ဂလိပ်နားမလည်လျှင်, အရေးမပါဘူး, လက်စွဲစာအုပ်များ၏ရုပ်ပုံများကိုမိမိတို့အဘို့စကားမပြောတတ်! သွား. ပျံသန်း!
အန်တိုနော့ဗ် An-124 အန်တိုနော့ဗ်လေကြောင်းလိုင်း FS2004
အန်တိုနော့ဗ် An-225 SSA အား & Cargo FS2004
အန်တိုနော့ဗ် An-24RV FS2004
အန်တိုနော့ဗ် An-26 v2009 FS2004